သူ့ကိုဘာ့ကြောင့် ကိုးကွယ်ကြရ သနည်း? | အမေးများအတွက် အဖြေလွှာ
သူ့ကိုဘာ့ကြောင့် ကိုးကွယ်ကြရ သနည်း?	December 10, 2009
ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်း အခန်းကြီးလေးတွင် ယေရှုက မာရ်နတ်ကိုပြောသော စကားဖြစ်ပါသည်။ ထိုစကား အားဖြင့် အစ္စလမ် ဘာသာဝင်များ၊ ဂျူးဘာသာဝင်များနှင့် ယေဟောဝါသက်သေခံများက အများဆုံးမေးတတ် ကြပါသည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၂၂ တွင် ရှင်ယောဟန်က ကောင်းကင်တမန်အား ပျပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ရန် လုပ်သောအခါ ကောင်းကင်တမန်က ငြင်းဆန်လျက် ဘုရားသခင်ကိုသာ ကိုးကွယ်ရန် မိန့်ဆိုခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ယေရှုဘုရားကိုယ်တော်တိုင် နှုတ်မှ ထိုကဲ့သို့ဆိုခဲ့သော်လည်း ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်က တမန်တော်များနှင့် လူနာများတို့၏ ပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ခြင်းကို ခံယူခဲ့ပါသည်။ ယေရှုဘုရားက အဘယ့်ကြောင့်မငြင်းခဲ့ပါသနည်း၊ ယေရှုသည် ကိုယ်တော်တိုင် ထာဝရဘုရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ယေရှုသည် ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို ရှင်ပေါလု(ရော ၉း၅၊ တိတု ၂း၁၃)၊ ရှင်ယောဟန်(ယော ၁း၁)၊ ရှင်ပေတရု(မ ၁၆း၁၆)နှင့် သောမတ် (ယော ၂၀း၂၈) တို့ကဝန်ခံခဲ့ကြပါသည်။ ယေရှု သည် ဘုရားဖြစ်ကြောင်း ရှင်ပေတရုဝန်ခံသောအခါ မိမိ၏ အသွေးအသားတည်းဟူသော သိစိတ်ကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိတော်မူသော ခမည်းတော်ဘုရားက ဖော်ပြတော်မူသတည်းဟု မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ (မ ၁၆း၁၇) လူ၏အတတ်ပညာ အတွေးအခေါ် များဖြင့် ယေရှုသည် ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို မသိနိုင်ပါ။ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းများ ယေရှုကိုမသိပါ၊ နောက်ဆုံး အချို့သော ကျမ်းစာကျောင်းများပင် သမ္မာကျမ်းစာကို ဝိညာဉ်တော်လမ်းပြမှု မပါဘဲ အသိတရားသက်သက်ဖြင့် သင်ကြားကြသော ကြောင့် ယေရှုကို မသိကြပါ။ ဝိညာဉ်ရေးမျက်စိကွယ်နေသော လောကအတတ်ပညာရှင်များသာ ဖြစ်ကြပါသည်။ ယေရှုကိုသိသော သူများကလည်း မိမိအသွေးအသားအားဖြင့် သိခြင်းမဟုတ်လို့ဝါကြွားစရာအခွင့်မရှိပါ။
ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်ကလည်း သူသည်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထာဝရဘုရား၏ နာမတော်ကိုပြစ်မှား လျှင် အသေသတ်ခြင်းကိုခံရမည် ဆိုသည့် ပညတ်ချက်အတိုင်း ဂျူးဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် တို့သည် ထိုကျမ်းချက်ကို ကိုးကားလျက် ယေရှုကိုသတ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (ဝတ် ၂၄း၁၆) ယေရှုက ငါသည် ခမည်းတော်နှင့် တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်၏ဟု ယေရှုဆိုခဲ့ပါသည်။ (ယော ၁၀း၃၀) ဂရိဘာသာစကားအားဖြင့် ယေရှုပြောခဲ့သော တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဟူသည့်စကား၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ဂုဏ်ရည်တူ၊ တန်ခိုးတူ၊ အဆင့်အတန်းတူ၊ အရာရာထပ်တူဖြစ်သည်ဟု ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ယေရှုက ခမည်းတော်ကိုရိုသေသကဲ့သို့ ငါ့ကိုလည်းရိုသေရမည်ဟု ဆိုခဲ့ ပါသည်။(ယော ၅း၂၃-၂၄) အကယ်၍ ခမည်းတော်သည် ယေရှုထက်မြင့်မြတ်ပါက ထိုစကားကို အသုံးပြုခွင့်မရှိပါ။ ငါ့ကိုမြင် သောသူသည် ခမည်းတော်ကိုမြင်၏ဟုလည်း ဆိုခဲ့ ပါသည်။(ယော ၁၄း၈-၉) ဘုရားသခင်သာလျှင်လူတို့၏အပြစ်ကို စီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့် ခွင့်လွှတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုကျမ်းစာ ဆိုသည့်အတိုင်း ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်လျက် အပြစ်လွတ်ပိုင်ကြောင်းကို လူတို့သိစေရန် လက်ခြေ သေသောသူအား ငါ့သား သင်၏ အပြစ်ကို လွတ်စေပြီဟု(မာ ၂း၅) မိန့်ဆိုလျက်အနာရောဂါကို ငြိမ်းစေခဲ့ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းတွင် ယေရှုသည် ထာဝရဘုရား ဖြစ်ကြောင်း ပြုခဲ့သည့်အမှုနှင့် အဆိုအမိန့် သက်သေများ များစွာဖေါ်ပြထားပါသည်။
ခမည်းတော်ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်က ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူချိန်နှင့် တောင်ပေါ်တွင် တပည့်တော်သုံးဦးနှင့်အတူရှိနေစဉ် ကောင်းကင် မှအသံတော်အားဖြင့် ဤသူကား ငါနှစ် သက်မြတ်နိုးရာငါ၏ ချစ်သားပေတည်း၊ သူ၏စကားကိုနားထောင်ရမည် ဟုမိန့်တော်မူ ခဲ့ပါသည်။ ထိုမိန့်ဆိုချက် အားဖြင့် ခမည်းတော်နှင့်ယေရှုဘုရား ထပ်တူဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်ပါသည်။ ထိုအထောက်အထားတို့အရ ယေရှုသည် ဘုရားစစ်စစ် ဖြစ်တော်မူ၏။ မိတ်ဆွေကို ခမည်းတော်ဘုရားက ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ယေရှုသည် ဘုရားဖြစ်ကြောင်း ကို သိနိုင်သည့် ဥာဏ်အလင်း ပေးပါစေသော။
One Response to “သူ့ကိုဘာ့ကြောင့် ကိုးကွယ်ကြရ သနည်း?”
ထို့အပြင်မာဂုပညာရှိတို့ သည်ယေရှူအားသူငယ်အရွယ်ဖြစ်လျှင့် ပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ကြသည်ဟုကျမ်းစာလာသတည်း
ထိုအခါ ဟေရုဒ်မင်းကြီးသည်၊ မာဂုပညာရှိတို့ကို မထင်မရှားခေါ်၍၊ ကြယ်ပေါ်ထွန်းသော အချိန်ကာလကို စေ့စေ့မေးမြန်းပြီးမှ၊ သင်တို့သွား၍ထိုသူငယ်ကိုကြိုးစားရှာကြပါ။ တွေ့လျှင်ငါ့ထံသို့ ပြန်လာ၍ ငါလည်းထိုသူငယ် ကိုဖူးတွေ့ပူဇော်ရအောင် ကြားပြောကြပါဟုမှာထားတော်မူလျက်၊ ဗက်လင်မြို့သို့စေလွှတ်လေ၏။
ထိုကြယ်ကိုမြင်ပြန်သောအခါ အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းရှိ၍၊ ၁၁အိမ်သို့ဝင်လေသော်၊ မယ်တော်မာရိနှင့် တကွ သူငယ်တော်ကိုတွေ့မြင်လျှင်ပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်၍၊